I-TREND e-Afrika uhlelo lokubambisana online - AfricArXiv
Ithimba I-TReND e-Afrika idale inethiwekhi yochwepheshe engasiza ososayensi base-Afrika ukuthi bathuthukise amaphrojekthi abawathandayo ngokubambisana nge-inthanethi, ngokudlulisa imikhawulo yokuhamba ebangelwe ubhadane lwamanje.
Usizo olutholakalayo lungaqala kusuka kumaphrojekthi amancane wesikhashana kuya ekuhlolweni okukhulu okunwebekayo ngaphezu kwezinyanga noma ngisho neminyaka futhi kungaholela ekubambisaneni okuhlala isikhathi eside ngaphesheya kwesimo samanje somhlaba wonke ngokuvakashelwa okukhona esizeni kanye nokuhwebelana kwabantu.
Ngeminye imininingwane landa Umhlahlandlela we-TReND e-Africa Online wokubambisana (PDF).
Ngokujoyina uhlelo lwethu olusha, iphrojekthi yakho izobhangqwa nochwepheshe ozimisele ukuqala ukusebenzisana okusha nawe! Thola usizo olwengeziwe futhi uthuthukise ukuxhumana kwakho nososayensi abavela emhlabeni jikelele. Ungachithi isikhathi, ujoyine manje!https://t.co/PwK6uS0rjd pic.twitter.com/LQQl94Zqlp
- I-TREND e-Afrika (@TReNDinAfrica) February 19, 2021
Ochwepheshe banoma yimuphi umkhakha wesayensi bamukelekile, kusuka kubafundi be-PhD kuya kosolwazi, abazizwa sengathi bafuna ukwenza ushintsho futhi basize abanye bafeze amaphupho abo esayensi.
Lapho sesitholile isicelo sakho, uzokwazi ukufinyelela ku-database yethu yephrojekthi ukuze uthole iphrojekthi ehambisana namakhono akho nesikhathi esikhona.
Amaqembu okungenani abantu abathathu abanemibuzo emincane nokungabaza, noma amaphrojekthi amakhulu adinga ukwesekwa okuhlala isikhathi eside angafaka isicelo sokuba nguzakwethu wase-Afrika ohlelweni lokusebenzisana ku-inthanethi.
Lapho sesitholile iphrojekthi yakho, izokwengezwa kudathabheyisi yethu yephrojekthi futhi yenziwe ifinyeleleke kubo bonke ochwepheshe ukuthola umcwaningi ofanele kakhulu ukukusiza ngephrojekthi yakho.
Bhalisa iphrojekthi yakho
Funda konke mayelana nohlelo lokusebenzisana kwe-TREND ku- ukuthandwa-media.org/collaborations
Mayelana ne-TREND e-Afrika
Ukusekela Isayensi e-Afrika. Kwa-TREND, sikholelwa ekubalulekeni kokuqanjwa kwesayensi ngenqubekela phambili kwezomnotho nakwezenhlalo. Sisekela ucwaningo lwe-biomedical e-Afrika ngokunikeza abacwaningi base-Afrika amathuluzi nobuchwepheshe bokuqhubekisela phambili izinhloso zabo zocwaningo.
Ekuqaleni yasungulwa eCambridge University, siyinhlangano engenzi nzuzo eqhutshwa ngokuyinhloko yinethiwekhi enkulu yamavolontiya ososayensi emanyuvesi aphezulu emhlabeni jikelele. Siyazifela ngokufukulwa kwezesayensi kanye nezinto ezintsha. | esingeli.org